Hooyada dhashay Abuu Mansuur Al amriki oo ka walaacsan xaalada wiilkeeda
Muqdisho:-Hooyada dhashay Abuu Mansuur Al amriki ayaa waxay aad uga walaacsan tahay wiilkeeda oo dhowr mar soo diray fariimo uu ku sheegayo in naftiisa ay halis ku jirto isaga oo ka baqanaya in ay dilaan Ururka Al-Shabaab.
Mrs:Debra Hammami oo ah hooyada dhashay Abuu Mansuur Al amriki ayaa waxay wareysi siisay Wargeyska Guardian ee ka soo baxa dalka Ingiriiska 19bishan waxayna ay sheegtay in wiilkeeda uu ku sugan yahay xaalad aan la tilmaami karin oo aad ciriiri u ah .
Mrs:Debra Hammami oo ah hooyada dhashay Abuu Mansuur Al amriki ayaa mar ay ka warameysay xaalada wiilkeeda waxay sheegtay in wiilkeeda uu marar badan hanjabaad ay uga timid Ururka Al-Shabaab iyada oo ku tilmaamtay nolasha wiilkeeda mid aad u culus.
Debra Hammami ayaa waxay kale oo sheegtay in ay mar rajeynayso in wiilka ay aragto oo uu soo laabto isaga oo bad qaba waloow ay arinkaas hadana ku tilmaamtay mid mucjiso ah .
Abu Mansuur Alamriki ayaa ka mid ahaa dhalinyaro badan oo ku biiray Ururka Al-Shabaab isaga oo in badan lagu arkay isaga oo tababar siinaya dhalinyaro ama ka qeyb galaya munaasabado ay qabteen Ururka Al-shabaab .
Cumar Xamaami oo loo yaqaan Abuu Mansuur Alamriki ayaa dhowr jeer soo dhigay muuqaalo uu leeyahay barta youtube gaar ahaa somalimuhajirwarrior isaga baaqyo kala duwan u diraya waxaana ugu danbeysay النداء الأخير من العبد الفقير؟؟؟ ~ The Final Appeal oo la soo dhigay Youtube-ka 7 Jan 2013 isaga baaq iyo codsi u diray hogaanka sare Ururka Al-Qacida.
Abu Mansuur Alamriki ayaa waxaa sidoo kale uu soo dhigay barta Internetka ee baahisa wararka Al-Qacida qoraalo iyo warbixino xasaasi ah kuwaas oo uu kaga waramayo xaalada dalka Soomaaliya laga soo bilaabo wakhtigii Midowga Maxaakimta Islaamiga ilaa haatan (Dib baan u soo qori doonaa )Inshalaah.
Halkan ka AkhrisoWargeyska Guardian warbixinta uu ka qoray Debra Hammami
C/Fitaax Maxamed Muuse